News - Bureau Veritas na-eme nyocha kwa afọ nke ISO na Tongke Flow Factory
Bureau Veritas na-eme nyocha kwa afọ nke ISO na Tongke Flow Factory
Shanghai Tongke Flow Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ dị elu nke na-elekwasị anya na R&D na n'ichepụta nke nnyefe mmiri na ngwaahịa ịchekwa ume, na ugbu a onye na-enye ihe nchekwa nchekwa ike maka ụlọ ọrụ. Ejikọtara ya na Shanghai Tongji & Nanhui Science Hi-tech Park Co., Ltd, Tongke nwere ndị ọrụ aka ọrụ nwere ahụmịhe. Site na ụdị ikike ike dị otu a Tongke na-agbaso ihe ọhụrụ wee guzobe ebe nyocha abụọ nke "nnyefe mmiri dị mma" na "njikwa ike nchekwa ike pụrụ iche" .By ugbu a Tongke enweela ihe ịga nke ọma na-eduga ọtụtụ rụzuru ụlọ na nnwere onwe nwere ọgụgụ isi.
ikike ikike, dị ka "SPH usoro elu oru oma onwe priming mgbapụta" na "ibu elu voltaji ike ịzọpụta mgbapụta usoro" est. N'otu oge Tongke mma na nkà na ụzụ nke ihe karịrị iri omenala nfuli dị ka vetikal tobaim, submersible mgbapụta, end- mmịpụta mmịpụta na igwe mgbapụta multistage, na-eme ka ogo ogo teknụzụ zuru oke na usoro ngwaahịa ọdịnala.
Orieslọ ọrụ agafeela BV asambodo ISO 9001: 2015, ISO 14001 asambodo usoro asambodo yana ngwaahịa ebuputere patented ka ebusara karịa mba 20.
Asambodo ISO 9001 na-egosiputa ikike ụlọ ọrụ anyị iji na-ezute ma gafere atụmanya ndị ahịa. Maka nke a, ọtụtụ ndị na - azụ ahịa chọrọ ka ndị na - ebubata ya bụrụ ndị asambodo ISO 9001 iji belata ihe egwu ha nke ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dara ogbenye. Azụmaahịa nke na-enweta asambodo ISO 9001 ga-enwe ike nweta mmụba dị mkpa na arụmọrụ na arụmọrụ ngwaahịa site na mbenata nsị na njehie, yana ịbawanye arụmọrụ.
ISO 9001 Quality Management System bụ ọkwa mma mma kacha ewu ewu n'ụwa niile, yana ihe karịrị otu nde ụlọ ọrụ enyere asambodo na mba 180 gburugburu ụwa. Ọ bụ naanị ọkọlọtọ na ezinụlọ 9000 nke ụkpụrụ nke International Organisation for Standardization (ISO) bipụtara nke enwere ike iji maka nzube nyocha. ISO 9001 na-ejekwa ozi dị ka ihe ndabere maka ọtụtụ ụkpụrụ dị iche iche metụtara ngalaba, gụnyere ISO 13485 ngwaọrụ ahụike, ISO / TS 16949 (automotive) na AS / EN 9100 (aerospace), yana usoro njikwa njikwa eji eme ihe dịka OHSAS 18001 na ISO 14001.
Post oge: Ọkt-27-2020